Dadka haatan nool oo la sheegay ‘inay asal ahaan ka soo jeedaan Botswana’ |
Dadka haatan nool oo la sheegay ‘inay asal ahaan ka soo jeedaan Botswana’
Saynisyahannada ayaa sheegay in dhammaan bani`aadamka haatan nool laga yaabo inay ka soo jeedaan gobol koofur ka xiga webiga Zambezi.
Dhulkaasi waxaa haatan daboolay cusbo, balse waxaa markii hore ku taallay haro laga yaabo inay saldhig u ahayd faraceenna 200,000 oo sano kahor.
Waxay saynisyahannadu sheegeen in dadka aan ka soo jeedno ay halkaasi degeen muddo haatan laga joogo 70,000 oo sano, ilaa cimilada gudaha ay is beddeshay.
Waxay bilaabeen inay u soo guuraan dhulka cagaaran, taasoo horseedday inay dadku isaga qaxaan Afrika.
“Waxaa cad in dadka haatan nool ay ku sugnaayeen Afrika qiyaastii 200,000 oo sano kahor,” ayay tiri Prof Vanessa Hayes, oo ka tirsan Machadka Cilmibaarista Caafimaadka ee Garvan ee dalka Australia.
Hase yeeshee saynisyahanno kale ayaa ka soo horjeeda hadalka Prof Hayes.
Dhulka la sheegay wuxuu ku yaallaa koofurta webiga Zambezi, oo ku yaalla waqooyiga Botswana.
Baarayaasha ayaa aaminsan in awoowayaasheen ay degeen meel u dhow harada weyn ee Lake Makgadikgadi, taasoo haatan ay dabooshay cusbo.
“Waa dhul aad u ballaaran, aad ayay u qoyanaan lahayd, aad ayay cagaar u ahaan lahayd,” ayay tiri Prof Hayes. “Waxayna run ahaantii noqon lahayd meel ay ku noolaadaan dadka haatan nool iyo duurjoogtaba.”
Kaddib markii ay halkaasi degganaayeen muddo 70,000 sano ah, dadka ayaa bilaabay inay guuraan. Iyagoo u guuraya halka uu roobku ka da`ay ee gobolka ka tirsan taasoo horseedday saddex jeer oo kale oo guuritaan ah kuwaasoo dhacay 130,000 ilaa 110,000 oo sano kahor
Dadkii ugu horreeyay ayaa u qaxay waqooyi-bari, waxaa raacay koox kale oo iyaguna u safartay dhanka koofur-galbeed halka jiilkii saddexaadna ay ku hareen oo ay ilaa iyo haatan halkaas ku nool yihiin.
Sheegashada saynisyahannada ayaa ku saleysan dib u raacid lagu sameeyay halka ay bani`aadamku ka soo faracmeen iyo hidda-sidaha DNA oo laga qaaday qaar ka mid ah dadka Afrikaanka ah.
Markii ay isku geeyeen baaritaanka hiddaha iyo dhulka iyo cimilada, ayay baarayaashu awoodeen inay sawir ka bixiyaan sida ay qaaradda Afrika ahaan lahayd 200,000 oo sano kahor.
Dib u qaabeynta sheekada bani`aadamka
Si kastaba, daraasadda, oo lagu daabacay wargeyska Nature, ayaa waxaa ka soo horjeestay mid ka mid khubarrada, oo sheegay in sheekada asalka bani`aamka aanan dib loogu qaabeyn karin baaritaanka hidda-sidaha oo la sameeyay.
Prof Chris Stringer oo ka tirsan Madxafka lagu keydiyo taariikhaha oo ku yaalla London, isla markaana aanan daraasadda ka qeyb qaadan ayaa sheegay in daraasaddani ay tahay mid aan la fahmi karin.